गुलियो खानेकुराले मधुमेह हुन्छ ? - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
गुलियो खानेकुराले मधुमेह हुन्छ ?
सुजाता अम्गाई !
दुई प्रकारको मधुमेह हुन्छ, टाइप-१ र टाइप-२ । यी दुबै मधुमेहको भिन्नतालाई सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । टाइप-१ मधुमेहमा इन्सुलिन उत्पादन गर्ने कोशिका शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीद्वारा नष्ट हुन्छ । जबकी टाइप-२ मधुमेहमो शरीरले प्यानक्रियाजद्वारा उत्पादन हुने इन्सुलिन प्रयोग गर्न सक्दैन ।
मंगलवार, माघ ६ २०७७१०:५२:५०
कोरोना-सङ्क्रमणमुक्त हुँदै काभ्रे
दरबार हाई स्कूल निरीक्ष
कोरोना अपडेट : थपिए १ सय १२ कोरोना संक्रमित, ४ संक्रमितको मृत्यु
कोरोना अपडेट : थप ११२ मा देखियो कोरोना सङ्क्रमण